डा. ललितकुमार मिश्र - कान्तिपुर समाचार
डा. ललितकुमार मिश्र का लेखहरु
डा. ललितकुमार मिश्र, आश्विन ६, २०७४
के तपाईंलाई थाहा छ ? हाथ, खुट्टाका नङहरुको रंगले पनि तपाईंको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिन सक्छन् । नङमा देखिने सेतो दाग, गुलाबीपन या धर्सो हुनुको अर्थ हो- शरीरमा कतै-कुनै गम्भिर प्रकृतिको रोग अदृश्यरुपमा पलाइरहेको छ । जस्तै- लिभर, मुटु, फोक्सो, छाला एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भन्ने कुराको प्रमाण व्याक्तिको नङबाट पनि थाहा हुन्छ ।
डा. ललितकुमार मिश्र, भाद्र २२, २०७४
डा. ललितकुमार मिश्र, भाद्र ७, २०७४
सायटिका कुनै रोग होईन, हाम्रो शरीर को एउटा लामो नाडीको नाम हो । जुन कम्मरको पाँचौ हड्डी तथा सेक्रम भटेब्राको बीचबाट हुँदै चाकदेखि खुट्टासम्म गएको हुन्छ । यस नाडीका तन्तु जब कुनै कारणवश च्यापिन्छ । त्यसबेला व्यक्तिलाई असहनीय दर्द महशुस हुन्छ । यस रोगमा दुखाई कम्मरबाट शुरु भएर तिघ्रा र पिडौंला हुँदै खुट्टाको औंलासम्म पुग्छ ।
रोग निदानमा जिब्रोको महत्व
डा. ललितकुमार मिश्र, वैशाख २९, २०७४
जब तपाईं आफ्नो या आफ्न्तको रोगोपचारको लागि कुनै चिकित्सक कहाँ पुग्नु हुन्छ । सम्बन्धित डाक्टरले तपाईंको कुरालाई सुन्दै नोट गर्दछ, तत्‌पश्चात् शारीरिक परीक्षणको क्रममा मुख-आँ...गर्न लगाएर जिब्रो बाहिर निकाल्नुस् भन्छ । र, मुखभित्र टर्च बालेर जिब्रोलाई मजासँग नियालेर हेर्दछ । टाउको दुखेको होस्, पेट या शरीरको कुनै अन्य भागमा नै पीडा किन नभएको होस्, चिकित्सकले जिब्रो भने अवश्य नै हेरेको अनुभव हामी तपाईंले गरेका छौं ।
ईरिटेबल वावेल सिन्ड्रोम : लक्षण तथा उपचार
डा. ललितकुमार मिश्र, वैशाख २०, २०७४
पेटसम्बन्धी रोग धेरै नेपालीहरूमा देखिने प्रमुख समस्या हो । अधिकांश पेटको रोगलाई औषधोपचार बाट निको पार्न सकिन्छ । तर कतिपय पेटका समस्या यस्ता पनि छन् जसलाई पूर्णरूपले निको पार्न सकिँदैन । यसरी पूर्णरुपले निकोपार्न नसकिने पेटसम्बन्धी समस्या हो- ईरिटेबल बाबेल सिन्ड्रोम (आईबीएस) ।
डा. ललितकुमार मिश्र, वैशाख १४, २०७४
राम्रो स्वास्थको लागि मात्र उचित डाइट लिनु मात्र प्रर्याप्त हुदैन । मिठो निद्रा पनि स्वस्थ्य रहनको लागि उति नै जरूरी छ । अचेल धेरैजसो व्यवसायमा (बिहान, दिउसो, राति ) गरी अलग-अलग तीन सिफ्टमा काम हुन्छ । यस्तोमा सबैभन्दा बढीअसर नाईट डयूटी गर्ने ब्यक्तिको निद्रामा पर्दछ । कहिलेकाहि त यस्तो हुन्छ कि किस्ता (टुक्रा) मा निदाउनु पर्ने हुन्छ । तर, छोटो समयको निद्रा लिनु स्वास्थ्यको लागि एकदमै खराब हुन्छ । एक रिसर्च रिपोर्टअनुसार बिल्कुलै न सुत्नु भन्दा पनि किस्ता-किस्तामा लिएको निद्रा बढी खतरनाक हुन्छ ।